अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्वतीय पर्यटनमा आशा जाग्दै » RealPati.com
Wednesday, 29, June, 2022
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्वतीय पर्यटनमा आशा जाग्दै
काठमाडौँ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० नजिकिँदै गर्दा नेपालको पर्वतीय पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गर्न अपरिहार्य महसुस गरिएको छ । विश्वको सर्वौच्च शिखर सगरमाथालगायतका अन्य हिमाल नयाँ पर्यटकीय उत्पादन पर्वतीय पर्यटनका लागि आशालाग्दो क्षेत्र प्रमाणित हुने निर्विवाद छ ।
प्रचारप्रसारको अभावमा अन्तर्राट्रिय जगत्मा नेपालका पर्यटकीय सम्भावना भएका पर्वतीय पर्यटनको बजारीकरण एवं प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन । पर्यटकलाई नयाँ स्वाद पस्किने उत्पादन नै पर्यटन वर्ष २०२० को विशेषता हुनसक्ने छ ।
अतिथिदेवो भवः भन्ने भावनालाई साकार तुल्याउँदै सेवाप्रवाह गर्न यस्ता पर्वतीय पर्यटनको प्रचारप्रसार हुनु जरुरी छ, भन्नुहुन्छ नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका महासचिव कुलबहादुर गुरुङ ।
देशको शान्ति सुरक्षा, राजनीति स्थिरता, अनुकूल मौसम र तीव्र प्रचारप्रसारका कारण पर्वतीय पर्यटनमा आकर्षण बढ्दो छ तर पर्याप्त प्रयास देखिँदैन । “नेपालमा यतिधेरै माउन्टेन छन् अहिलेको अवस्थामा आएका पर्यटक उल्लेखनीय होइन, गुरुङले भन्नुभयो, अझै प्रचारप्रसार गर्नु जरुरी छ ।”
उहाँले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष पर्वतारोहण गर्ने पर्यटकको सङ्ख्या ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको भन्दै पर्वतीय पर्यटनको विकासमा फड्को मार्ने विश्वास लिइएको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अनुसार सन् २०१६ मा पाँच हजार ८०० देखि छ हजार ५०० मिटर उचाइका हिमचुली आरोहण गर्ने पर्यटकको सङ्ख्या चार हजार ८२३ थियो । सन् २०१७ मा यसको सङ्ख्या बढेर पाँच हजार ९२९ पुगेको तथ्याङ्क छ ।
राजश्व भने सन् २०१६ मा सात लाख ५१ हजार ५३५ अमेरिकी डलर (रु आठ करोड ६४ लाख) थियो । २०१७ मा भने नौ लाख ९७ हजार ८२३ अमेरिकी डलर (रु ११ करोड ४७ लाख) राजश्व सङ्कलन भएको थियो । सन् २०१८ मा भने पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएको सङ्घको दाबी छ । नेपाल पर्वतारोहण सङ्घमार्फत नेपालका २७ हिमचुलीको व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । नेपालको हिमालय क्षेत्रमा तीन हजार ३१० हिमचुली छन् । त्यसमध्ये छ हजार मिटर उचाइका एक हजार ३१० हिमचुली छन् ।
सात हजार मिटरमाथिका १२२ र आठ हजारमाथिका हिमचुली १४ वटा छ । सरकारले अहिलेसम्म ४१४ हिमचुलीमा प्रवेश खुला गरेको छ । जसमध्ये २७ हिमचुली आरोहणको व्यवस्थापन सङ्घले गर्छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा अब सङ्घले नयाँनयाँ हिमचुलीको खोजी गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । “एउटै मान्छे एउटै हिमाल चढ्न बारम्बार आउँदैन, नयाँ ठाउँ खोज्नुपर्छ, तपाईहरु गर्नुहोस्, सरकारले यसमा सहयोग गर्छ ।” देवकोटाले भन्नुभयो ।
अहिले पर्वतारोहणका विदेशीलाई प्रतिव्यक्ति १२५ डलर प्रवेश शुल्क छ । नेपालीलाई रु दुई हजार छ । उनीहरुले एकपटक जाँदा तीनदेखि चार हजार डलरसम्म खर्च गर्ने गरेका छन् ।
हिउँपहिरोमा परेकाका परिवारलाई राहत
नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले आज काठमाडौँमा ४५औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । धौलागिरि क्षेत्रको गुर्जा हिमाल चढ्ने क्रममा हिउँ पहिरोमा परी ज्यान गुमाएका चार जनाका परिवारलाई आज राहत वितरण गरिएको छ । गएको अक्टोबर १२ उक्त घटना भएको थियो ।
सङ्घले प्रतिपरिवार रु ५० हजारका दरले राहत वितरण गरेको हो । पाँचजना कोरियन नागरिकसहित हिमाल आरोहणका क्रममा आरोहण सहयोगी सङ्खुवासभाका डेना आङजुक भोटे, फुर्पु भोटे, छिरिङ भोटे र म्याग्दीका नेत्रबहादुर छन्तेलको हिउँपहिरोमा परी निधन भएको थियो ।
पीडित परिवारलाई काजकिरियाका लागि रु ५० हजारका दरले रु दुई लाखको चेक हस्तान्तरण गरिएको सङ्घका अध्यक्ष सन्तवीर लामाले जानकारी दिनुभयो । सो क्रममा सङ्घका उपाध्यक्ष दिवेशविक्रम शाह, सल्लाहकार शम्भु तामाङलगायतले मन्तव्य राख्नुभएको थियो । –नारायण ढुङ्गाना /रासस
The Embassy of Pakistan organized an Alumni Get Together
Embassy of Pakistan organized “Pakistan Land of Adventure & Nature” event
सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने सत्ता गठबन्धनको सहमति
काजाकिस्तानमा हुने एसियाली १२ एन्ड यू फाइनल खेलका लागि पाकिस्तान छनोट
एसपीपीबारे अमेरिकी दूतावासको स्पटिकरण
एक व्यक्ति बिजुलीको हाइटेन्सन प्रसारण लाईनमा चढ्दा करिब ९० लाख बराबरको घाटा
गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच विवाह 78 views
नेपालमा ८ जना भारतीयको नागरिकता रद्ध, भारतमा हलचल 77 views
बिरामीको मन जित्दै अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर 68 views
बुढानीलकण्ठ स्कूलको अभिभावक भेलामा मध्यरातमा माइक हानाहान र मतपत्र च्याताच्यात 59 views
Pakistan Embassy helds talk Programme on Kashmir Dispute 55 views
दशगजा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाबल एसएसबीको पोष्ट खडा
हरायो त्रिशूलीको कान्छी बदाम !
माओवादी त्यागेर एमालेमा गएका जनप्रतिनिधि पदमुक्त
The Undeniable Truth About Business That Nobody Is Showing You
गाेरखाबाट कसरी ल्याइन्छ फुलपाती?
सम्पादक : यस. अधिकारी
विज्ञापनका लागि : , realpati2019@gmail.com
Copyright ©2022 . All rights reserved. | Site by Prosys Solution.